Season of Gold | Myanmar Business Today
Home Business Local Season of Gold
Phyo Thu/Myanmar Business Today
Myanmar people used to take so-called “pilgrimage tours” to major religious sites across the country. Long before tour companies became popular, people would travel to famous pagodas onamini-bus called the BM bus, as air-conditioned express cars were not yet available. The itinerary almost never changed, because people only knewafew places. Top destinations in those days included Shwe Set Taw, Kyaikhtee Yoe Pagoda, Shwe Sar Yan Pagoda in Pyay, Inle Lake in Shan State, Kaunghmudaw in Sagaing, Bagan and other popular places such as Chaung Thar and Ngapali.
Since the spread of the internet, Myanmar travelers’ destination lists have grown to include beaches, mountains, plains and historical sites, seasonal festivals and even neighboring countries.
One place, however, has remained at the top of must-visit lists: The Golden Rock or Kyaikhtee Yoe. The place receives local and foreign visitors year-round, most of the foreign ones coming from Thailand, Korea and Japan. High season at the pagoda is September to the rainy season, and other crowded periods include major holidays, such as Thadingyut Festival and Tazaungdaing Festival, and the month of December through Christmas. During the holiday season, the pagoda is packed with visitors from around the country. All through this overcrowded period, visitors often sleep where they can, even on the platform of the pagoda, as there is no more room available at nearby hotels and motels.
If you want to visit the pagoda peacefully, avoid the high season and festival times. Other places worth visiting near the pagoda include Kyauk Htat Gyi, the Frog Pagoda, the Fish Pagoda andawaterfall.
According to the Ministry of Hotels and Tourism, the Golden Rock was built in 574 BC. There are legends surrounding the history of the pagoda, which sits atopagiant boulder onacliff 1,095 feet above sea level.
A two-day, one-night trip to the pagoda, 229 k.m. from Yangon, will cost around K50,000 per person. Further adding to the pagoda’s tourist appeal,acable car service was launched last year offeringadifferent and spectacular view.
This year, the festival for the Golden Rock runs for seven months from the full moon day of Thadingyut (October) to the full moon day of Kason (April). Higher visitor numbers can be expected during this period. When there is no festival, visitor volume can drop. Despite these fluctuations, the pagoda continues to be one of the most visited sites in Myanmar andafavorite of travelers from across the country and beyond.
မြန်မာလူမျိုးအများစုအနေနဲ့ကတော့ ဘာသာရေးကို အခြေခံတဲ့ ခရီးသွားခြင်း တနည်းအားဖြင့် မြန်မာပြည်အနှံ့ဘုရားဖူးထွက်တဲ့ အလေ့အထမျိုးကတော့ ဟိုးအရင့်အရင်ကတည်းကရှိတတ်ပါတယ်။ ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေအခုလို မပေါများခင်ကတည်းက ပြည်တွင်းဘုရားဖူးခရီးစဉ်တွေက နီးစပ်ရာလူစုပြီးသွားလေ့ရှိကြပါတယ်။ အခုလို Air Con ပါမှန်အလုံပိတ်ကားတွေ မရှိသေးခင်အချိန်ကတည်းက သစ်သားထိုင်ခုံနဲ့ ဘီအမ်ကားလုံးလုံးလေးတွေနဲ့ သွားခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒီအချိန်က သွားလေ့ရှိတဲ့ ခရီးစဉ်စာရင်းကတော့ နှစ်စဉ်သိပ်အပြာင်းအလဲမရှိလှပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် လောက်က အခုလိုနေရာအသစ်တွေ၊ ထူးခြားတဲ့ ခရီးစဉ်တွေအကြောင်း သိတဲ့သူနည်းတဲ့အတွက် လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ခရီးစဉ်စာရင်းမှာအများဆုံးအသွားများလေ့ရှိတာကတော့ ရွှေစက်တော် ၊ ကျိုက်ထီးရိုး၊ ပြည် ရွှေစာရံ၊ ရှမ်းပြည်အင်းလေး၊ တောင်ကြီး၊ စစ်ကိုင်းကောင်းမှှုတော်၊ ပုဂံ ၊ ချောင်းသား ၊ ငပလီ ဒီလောက်ပါပဲ ။ ဒီဘက်ခေတ် အင်တာနက်ကိုလှိုင်လှိုင်ကြီး သုံးလို့ရလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ နှစ်စဉ်အားလပ်ရက်ခရီးသွားဖို့ စီစဉ်ထားသူတွေရဲ့စာရင်းထဲမှာ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေ၊ တောတောင်တွေ၊ လွယ်ပြင်ကျယ်တွေ၊ သမိုင်းဝင်နေရာတွေ ရာသီအလိုက်ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့နေရာတွေ စသဖြင့်ရှိလာပါတယ်။ တခါတရံအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ တောင်ပါလာတတ်ပါတယ်။
ဒီခေတ်ကာလနှစ်ခုလုံးအထိ ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေစိတ်ဝင်စားနေမြဲ သွားနေမြဲနေရာတွေကလည်းရှိလာသလို၊ ကမ်းခြေအသစ်တွေ၊ နေရာအသစ်တွေ၊ ခရီးသွားအစီအစဉ်အသစ်တွေတိုးလာပါတယ်။ အခုအချိန်အထိပြည်တွင်းပြည်ပစိတ်ဝင်တစားသွားနေကြဆဲ ခရီးသွားနေရာတစ်ခုထဲ မွန်ပြည်နယ်က ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်ခရီးစဉ်ကလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပခရီးသွား ထိုင်း ၊ တရုတ် ၊ ကိုရီးယား ၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေ အဓိကလာရောက်ကြတဲ့ ဒီခရီးစဉ်က ပွင့်လင်းရာသီစက်တင်ဘာကနေ မိုးရာသီမဝင်ခင်အချိန်ထိ ခရီးသွားမပြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ ပွဲတော်ရက်တွေဖြစ်တဲ့သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ၊တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့နဲ့ ဒီဇင်ဘာနှစ်သစ်ကူးနဲ့ ခရစ္စမတ်ကာလတွေမှာ ခရီးသွားတွေအထူးများလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်တွေမှာဆို တည်းခိုဖို့နေရာတွေ၊ တောင်တက်ကားစီးသူတွေကလည်းပြည့်နေတတ်ပြီးတော့ တိုးလို့မပေါက်တဲ့အခြေအနေတွေတောင် ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာရှိတတ်ပါတယ်။ ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာတင် အိပ်ရလောက်အောင် စည်ကားလေ့ရှိပါတယ်။
စိတ်အေးလက်အေးနေချင်တယ် ။ ရင်ပြင်တော်မှာ ဆွမ်းဆီမီး ၊ သင်္ကန်း လှူဖွယ်ဝတ္ထု အစုံစုံကပ်ပြီး မိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အပန်းပြေစိတ်ပြေလက်ပျောက်တစ်ယောက်တည်းသွားချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုအခါကြီးရက်ကြီးသွားတာမျိုးကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ရင်ပြင်တော်ကိုအပြင် တောင်တဝိုက်မှာရှိနေတဲ့ ကျောက်ထပ်ကြီး ၊ ဖားဘုရား ၊ငါးဘုရား၊ ရေတံခွန်တွေကို သွားဖို့ကလည်း ခရီးသွားအတော်အသင့်လောက်ပဲရှိတဲ့ အချိန်မျိုးကအကောင်းဆုံးလို့ပြောပါရစေ ၊ နိုင်ငံတကာအသုံးအနှုန်းမျိုးမှာ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီကို ရွှေရောင်ကျောက်တုံးကြီး The Golden Rock လို့ နာမည်ရှိပြီး ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ လူသိများတဲ့ ဒီစေတီကို ဘီစီ ၅၇၄ တွင် တည်ထားခဲ့တာလို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ သမိုင်းအရတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းစေတီဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ဖွဲ့ဆိုထားတတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကသွားရင် ၂၂၉ ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ စေတီဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၀၉၅ မီတာ အမြင့်မှာတည်ရှိသလို ကျောက်ကမ်းပါးအစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးပေါ်မှာ စေတီကတည်ရှိနေတာက ထူးဆန်းနေပြီးတော့ ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေ အတွက်ထုံးတမ်းတစ်ခုလို သွားလေ့ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သွားမယ်ဆိုရင် လူတစ်ယောက်ကို ကျပ်ငါးသောင်းလောက်နဲ့ တစ်ညအိပ်နှစ်ရက်ခရီးလောက်တော့နိုင်သလို ၊ ခရီးသွားအစီအစဉ်တွေကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူစုံစမ်းလို့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျိုက်ထီးရိုးကို သွားသင့်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ ကေဘယ်ကားကိုအရင်နှစ်က စတင်ပြီးပြေးဆွဲခွင့်ရလာတာကြောင့်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ကားနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ခြေလျင်တောင်တက်ခရီးဖြစ်ဖြစ်သွားနေရင်းမြင်နေကျ မြင်ကွင်းတွေထက်စာရင် ဘယ်လိုမြင်ကွင်းတွေများ ရှုစားနိုင်မလဲစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဒီနှစ်အတွက် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပွဲတော်ဟာ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ကနေ ကဆုန်လပြည့်နေ့အထိ ခုနှစ်လတိုင်တိုင် ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်နှစ်တွေထက် ခရီးသွားကပိုများနိုင်တယ်လို့ သတင်းတွေက သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွဲတော်ကြီးကျင်းပတဲ့ရက်တွေကလွဲရင် ကြားရက်တွေက ခရီးသွားနည်းနိုင်ပါတယ်။ ခရီးသွားတွေစိတ်ဝင်တစားသွားကြတဲ့ မွန်ပြည်နယ်ကတော့ အမြဲ ဖော်ရွေနေဆဲ ဒေသတစ်ခုအနေနဲ့ စောင့်မျှော်နေဆဲပါ။
Previous articleMyanmar People Interested in Biometric Payment and Authentication
Next articleMinistry of Energy to Issue Village Gas Station Licenses